မိုးစက္ေတြေအာက္က စိမ္းလန္းေနတဲ႔ တစ္ရက္တာ ပုဂံေျမ
မိုးစက်တွေအောက်က စိမ်းလန်းနေတဲ့ တစ်ရက်တာ ပုဂံမြေ
“မြန်မာ့ပထမ နိုင်ငံတော်၊ သွေးသားထဲက အင်ပါယာ
မြန်မာဟေ့ မြန်မာလို့၊ ကမ္ဘာသိအောင် လက်ခမောင်းခတ်
မြန်မာမှန်လို့ ငါသည်လည်း ပုဂံရောက်ခဲ့ပြီလေး။” - သီဟလုလင် မိုးတွင်း ပြည်တွင်းမှာ ခရီးသွားလို့ အကောင်းဆုံးနေရာကို အသေးစား Voting လေးယူတော့ ပုဂံ လို့ အများစုက ဖြေကြတယ်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း မိုးတွင်းမှာ ခရီးထွက်ရမှာကို အကြိုက်ဆုံးကတော့ ပုဂံ ပါပဲ။ ပုဂံကို မိုးတွင်းမှာ ခရီးသွားရင် အေးမြတယ်။ စိမ်းစိုသန့်ရှင်းနေတဲ့ ပုဂံ ကို မြင်ရမယ်။ လူရှင်းတော့ အေးအေးဆေးဆေး လည်ပတ် ဘုရားဖူးလို့ရတယ်။ တည်းခိုခ နဲ့ စားသောက်ခတွေ နည်းနိုင်တယ်။ ဒီလို ကောင်းတဲ့ဘက်က ကိစ္စတွေများတော့ ပုဂံ ကို မြန်မာတိုင်း စိတ်အားသန်နေတာ မဆန်းဘူး။ ဆန်းတာက ပုဂံကို ခရီးသွားချင်တာသာ ရှိတယ်။ ဘယ်မှာလဲ အားလပ်ရက်။ မိုးတွင်းဆို ရုံးပိတ်ရက်က ခပ်ရှားရှားရယ်။ ရှားရှားပါးပါးရှိတဲ့ ဇူလိုင် (၁၉) အာဇာနည်နေ့လေးတောင် ကြားရက်ဖြစ်ခဲ့ရင်၊ စနေ တနင်္ဂနွေထဲ ဝင်သွားခဲ့ရင် မျှော်လင့်ချက်မဲ့ပြီလေ။ ၂၀၁၇ ရဲ့ အာဇာနည်နေ့က ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကြီးတဲ့။ လှပြီလေ။
မြန်မာတွေ အားလုံးရဲ့ ပုဂံ
လှည်းဝင်ရိုးသံ တညံညံ ဆိုပြီး စေတီပေါင်း ၄၄၄၆ ရှိတယ်လို့ အမှတ်အသားပြုခဲ့ကြတဲ့ ပုဂံမြေဟာ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ အတိတ်၊ ပစ္စုပ္ပန်နဲ့ အနာဂါတ် ပါ။ ဆိုရိုးတွေ၊ မှတ်သားပုံတွေ အမျိုးမျိုး ရှိခဲ့လို့ ပုဂံမှာ ရှိတဲ့ စေတီအရေအတွက်ကိုတောင် အငြင်းပွားစရာ ဖြစ်နေခဲ့ရပေမဲ့ မြန်မာတိုင်းရဲ့ ရင်ထဲမှာ ပုဂံ ကို အကြီးကျယ် အခမ်းနားဆုံး ပုံဖော်ထားကြပြီးသားပါ။ ပထမနိုင်ငံတော် ဖြစ်ရုံမကဘူး နိုင်ငံသားအများစု ကိုးကွယ်ကြတဲ့ ထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာ ကို စတင် မျိုးစေ့ချရာ နေရာတစ်ခုလည်း ဖြစ်ခဲ့လို့ပါ။ ငလျင် နဲ့ ဧရာဝတီမြစ်ကမ်းပါးပြိုလဲမှု ဆိုတဲ့ သဘာဝဘေးအမျိုးမျိုးကြောင့် ခုဆို စေတီပေါင်း ၂၀၀၀ ဝန်းကျင်ပဲ ရှိနိုင်မယ်လို့ တချို့ကလည်း သတ်မှတ်ကြပါတယ်။
ပုဂံ ကို နိုင်ငံတစ်ခုအသွင် ခရစ်နှစ် ၁၀၇ ခုနှစ်မှာ သမုဒ္ဒရာဇ်မင်း ထူထောင်ခဲ့တာဖြစ်လို့ ခုဆိုရင် နှစ်ပေါင်း ၁၉၀၀ ကျော် ရှိပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ အနော်ရထာမင်းကြီး ရဲ့ ပထမမြန်မာနိုင်ငံတော်ကို အေဒီ ၁၀၄၄ - ၁၀၇၇ တည်ထောင်စဉ်က ပုဂံဟာ သာသနာနဲ့ပတ်သက်ပြီး အရှိန်ကောင်းခဲ့တဲ့ ဒေသတစ်ခု ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ သမုဒ္ဒရာဇ်မင်း က စလို့ မင်းပေါင်း ၅၆ ပါး အုပ်ချုပ်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ နောက်ဆုံးမင်းဖြစ်တဲ့ စောမွန်နစ် လက်ထက်ကျမှ ပုဂံပျက်သုန်းပြီး ပင်းယ၊ အင်းဝ၊ စစ်ကိုင်း စတဲ့ မြို့တော်တွေ ပေါ်လာတယ်လို့မှတ်သားရပါတယ်။
ဒီတော့ ပုဂံကို တစ်ရက်တာ ခရီးလေး စဉ်းစားကြည့်ရအောင်။ စနေ နဲ့ တနင်္ဂနွေ ပိတ်ရက်လေးကိုပဲ စဉ်းစားကြည့်တာပေါ့လေ။ ကိုယ်ပိုင်ကားလေးနဲ့က ရှင်းတယ်။ မနက်စောစော ၄ နာရီလောက် ထွက်ရင် ပုဂံကို နေ့လည် ၁၂ နာရီလောက်ဆို ရောက်နိုင်ပြီ။ မန္တလေးကနေဆိုလည်း ၁၀ နာရီ ဝန်းကျင်လောက်ဆို ရောက်နိုင်တယ်။ အဝေးပြေးကားတွေနဲ့ဆိုရင်တော့ သောကြာညထွက်၊ တနင်္ဂနွေည ပြန် လုပ်လို့ရတယ်။ အချိန်ပိုထွက်မဲ့ သဘောရှိတယ်။ မီးရထားတော့ ဒီအချိန်တော့ မစဉ်းစားပါနဲ့ဦးလေ။ လေယာဉ်နဲ့ဆိုလည်း မနက်ပိုင်း ၆ နာရီ လေယာဉ်နဲ့ဆို ၇ နာရီဝန်းကျင်လောက် ပုဂံရောက်မယ်၊ နောက်ရက် ညနေ ၄ နာရီ လေယာဉ်နဲ့ ရန်ကုန်ပြန်မယ်။ ဒါမျိုး လုပ်လို့ရတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ဒီတစ်ခါ ပုဂံကို မန္တလေးကနေ သွားခဲ့ရပါတယ်။
ပုဂံမှာ စားလို့ကောင်းတဲ့ မြန်မာစားသောက်ဆိုင်လေးတွေ ပေါပါတယ်။ မြန်မာဘူဖေး ဆိုတာလည်း တော်တော်များများမှာ ရနေပြီ။ ကျွန်တော် အကြိုက်ဆုံးက မျိုးမျိုး ပေါ့နော်။ ပုဂံ - ညောင်ဦး လမ်းပေါ်မှာ ရှိတယ်။ မနက်စာ၊ နေ့လည်စာတွေ စားဖို့ အဆင်ပြေတယ်။ ဈေးကတော့ တခြားမြန်မာဘူဖေး ဆိုင်ထက် ဈေးနည်းနည်းများပေမဲ့ လက်ရာရော၊ သန့်ပြန့်မှုနဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေကို သဘောကျမိတယ်။ လှိုင်လှိုင်ဖြိုး၊ သရပါ-၃ နဲ့ တခြားဆိုင်တွေလည်း ရှိပါသေးတယ်။ နည်းနည်းဈေးကြီးတဲ့ထဲကဆိုရင် ကျွန်တော် သဘောကျမိတာ ပုဂံနန်းမြင့်မျှော်စင်ပေါ်ကနေ ပုဂံအလှကို ကြည့်ပြီး စားလို့ရတဲ့ ဆိုင်လေး။ မျှော်စင်ဝင်ကြေးလည်း ပေးရသလို၊ အစားအသောက်ကလည်း သူတကာထက် ဈေးတော့ ပိုတယ်။ ဒါပေမဲ့ သန့်ရှင်းပြီး စားကောင်းပါတယ်။ မြန်မာအပြင် တရုတ်၊ ထိုင်း နဲ့ ယူရိုပီယမ်အစားအစာတွေလည်း ရတယ်။ နောက် ပုဂံမြို့သစ် ခွာညိုလမ်းထဲက The Teak House မှာလည်း စားကောင်းတယ်။ နိုင်ငံခြားသားတွေ ကြိုက်မဲ့ပုံစံပေါ့။ ကျွန်းရှေးဟောင်းအိမ်ကြီးမှာ စားရတဲ့ ခံစားမှုမျိုးပေးတယ်။ ထူးခြားတဲ့ အမဲသားထန်းရည်နှပ် လိုမျိုးတွေ ရတယ်။ ဈေးကတော့ကြီးပါတယ်။ ညစာ စားမယ်ဆိုရင် ပုဂံမှာ အကင်ဆိုင်တွေ၊ စားသောက်ဆိုင်တွေ၊ ဘားတွေ တန်းစီပြီးရှိနေတဲ့နေရာလေး ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီမှာ တည်းခိုခန်းနဲ့ ဟိုတယ်အသေးစားလေးတွေလည်း ရှိတတ်တယ်။ ညောင်ဦးထဲမှာပေါ့။ အဲ့ဒီကို သွားပြီး စားသောက်နိုင်တယ်။
ကိုယ့်ဘတ်ဂျက်နဲ့ စဉ်းစားရမှာပေါ့နော်။ ညောင်ဦးမြို့ထဲမှာ တည်းမလား၊ ပုဂံမြို့ဟောင်းမှာ တည်းမလား၊ ပုဂံမြို့သစ်မှာ တည်းမလား ထပ်စဉ်းစားရမယ်။ ညောင်ဦးထဲမှာတော့ ဈေးချိုတဲ့ တည်းခိုခန်းလေးတွေ ရှိတတ်တယ်။ ပုဂံမြို့ဟောင်းမှာတော့ ဈေးမြင့်တဲ့ ဟိုတယ်တွေ ရှိတယ်။ ပုဂံမြို့သစ်ထဲမှာတော့ ဈေးတော် တဲ့ ဟိုတယ်တွေ ရှိနေကြတယ်။ အားသာချက် အားနည်းချက်လေးတွေတော့ ရှိတတ်တယ်။ ညောင်ဦးထဲက တည်းခိုခန်းလေးတွေက ဈေးလည်း သက်သာသလို တခြားဝန်ဆောင်ပေးမှုအပိုင်းမှာ အများကြီး မျှော်လင့်လို့တော့ မရဘူးပေါ့။ မြို့ဟောင်းထဲက ဟိုတယ်တွေက ဈေးမြင့်တယ်။ ပုဂံဘုရားတွေကြားက ဟိုတယ်တွေ ဆိုပြီး အဝေဖန်ခံနေရတဲ့ ဟိုတယ်တွေ ကြားဖူးခဲ့သလို၊ တချို့လည်း ဘာရှိတယ် ညာရှိတယ် ဆိုတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေလည်း ကြားဖူးတယ်။ ကျွန်တော်တော့ တခါမှ မတည်းဖူးခဲ့တော့ သူများပြောသလို ဟုတ်လား၊ မဟုတ်လားလည်း မသိပါဘူး။ မြို့သစ်က ဟိုတယ်တွေကျတော့ အသစ်တွေများတယ်။ အဆင့်မြင့်ပြီး သန့်တယ်။ ဘုရားဖူး သွားလာဖို့တော့ နည်းနည်းလှမ်းတယ်။ ဒါပေမဲ့ လေယာဉ်နဲ့ လာတာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ အဝေးပြေးကားနဲ့ လာတာပဲဖြစ်ဖြစ် ပုဂံမြို့သစ်က ဟိုတယ်တွေက ပိုအဆင်ပြေပြန်ရော။
ကျွန်တော် က ဒီတစ်ခေါက် ပုဂံကို ရောက်တော့ The Regency Hotel မှာ တည်းဖြစ်တယ်။ သူက ညောင်ဦး - ကျောက်ပန်းတောင်းကားလမ်းပေါ် မှာ ရှိတာ။ ဘေးမှာက ပုဂံ အဝေးပြေးကားကြီးကွင်း ရွှေပြည် ဆိုတာ ရှိတယ်။ အဝေးပြေးကားနဲ့လာရင် အသွား၊ အပြန် အဆင်ပြေတဲ့နေရာပါ။ ဟိုတယ်က မနက်စာ ကို ဘူဖေး သေသေချာချာ ခင်းပေးတယ်။ အများကြီးပဲ။ စုံတယ်။ ပြီးတော့ ရေကူးကန်လည်း အရမ်းကောင်းတယ်။ အခန်းတွေလည်း သန့်ပြီး ရေချိုးခန်းသုံး ပစ္စည်းတွေက နောက်ဆုံးပေါ်တွေမို့ သဘောကျမိတယ်။ ကျွန်တော်က Superior အခန်းမှာ နေခဲ့တော့ အခန်းက တခြားဟိုတယ်တွေရဲ့ Superior ထက် နည်းနည်းကျဉ်းတယ်လို့ ခံစားရပေမဲ့ ဝရံတာ ပါတာကိုတော့ သဘောကျတယ်။ မိုးတွင်းမှာ လေအေးအေးနဲ့ အပြင်ထွက်ပြီး အအေးသောက် ဇိမ်ယူနေလို့ရတယ်။ ဟိုတယ်က ညောင်ဦးလေဆိပ်နဲ့လည်း နီးတယ်။ ကိုယ်ပိုင်ကားနဲ့ဆိုရင်လည်း ကားပါကင် ကောင်းသလို၊ လုံခြုံရေးတွေလည်း ရှိတော့ စိတ်ချရတယ်။ ဒီအချက်တွေကို ကြည့်ပြီး သဘောကျလို့ ဒီ The Regency Hotel မှာ တည်းဖြစ်ခဲ့တာ။ မိုးတွင်းကာလဆိုတော့ အရင် ၅ သောင်းတန် အခန်းဆို ခု ၄ သောင်းပဲ ပေးရတယ်။
ပုဂံမှာ တစ်ရက်တာ ဘုရားဖူးခရီးစဉ်ဘယ်လို သွားမလဲ?
ကိုယ်ပိုင်ကားနဲ့ ဆိုရင်ကတော့ အဆင်ပြေတယ်။ လမ်းကြောင်းဆွဲပြီး သွားလိုက်ရုံပဲ။ ကားမပါလာရင်တော့ ကားငှားလို့ရတယ်။ ဈေးလည်း သိပ်မကြီးလှပါဘူး။ ဒါမှမဟုတ် ဆိုင်ကယ်နဲ့ ပုဂံမြို့ဟောင်းထဲဝင် ပြီးတော့ E-bike လေးနဲ့ သွားပေါ့။၊ ထောင့်ငါးရာလောက်ပဲ ပေးရတာ။ မြင်းလှည်းလည်း စီးလို့ရပါသေးတယ်။ ဈေးတော့ ကြီးပါမယ်။
တစ်ရက်တာ ခရီးစဉ်ကို အဆင်ပြေဆုံးက အဝေးပြေးကားနဲ့ လာတဲ့ခရီးသွားတွေလို့ ဆိုရမယ်။ သူတို့က မနက် ၆ နာရီလောက်ဆို ပုဂံရောက်ပြီဆိုတော့ ဟိုတယ်မှာ အထုတ်ထားပြီးတာနဲ့ စထွက်လို့ရပြီ။ စွယ်တော်လေးဆူ နေ့ချင်းဖူးဖို့ အဆင်ပြေတယ်။ မီနိုင်တယ်ပြောရမယ်။ ကားတော့ ငှားမှ ဖြစ်မယ်။
အောက်မှာ ဖော်ပြထားတာတွေက မိုးတွင်းရယ်မှ မဟုတ်ပါဘူး၊ ဘယ်အချိန်မဆို ပုဂံရောက်ရင် သွားရောက် ဖူးမြော်သင့်တဲ့ ဘုရားစေတီတွေပါ။
ဒီ စွယ်တော်လေးဆူ စေတီတော်တွေကို နေ့မွန်းမတည့်ခင် ဖူးမယ်။ ဆုတစ်မျိုးတည်း တောင်းမယ်ဆိုရင် ပြည့်တယ်လို့ ယုံကြည်ကြပါတယ်။ ရွှေစည်းခုံ၊ လောကနန္ဒာ နဲ့ တုရင်တောင် တို့က ကားနဲ့ မြန်မြန်ဆန်ဆန်ရောက်နေပေမဲ့ တန့်ကြည့်တောင် ကိုတော့ ဧရာဝတီမြစ်ကို ကူးပြီး တောင်ပေါ်ထပ်တက်ရသေးတာမို့ အချိန်အနည်းငယ်ယူပါတယ်။
ပြည့် ငါး ပြည့်
(၁) ဓမ္မရာဇကဘုရား တောင်ဘက်မုခ် က ဆုတောင်းပြည့်ဘုရား
(၂) ဓမ္မရာဇကဘုရားဝန်းအတွင်းက ဆုတောင်းပြည့်ဘုရား
(၃) တာမဏီသိမ်တော်ဘုရားအတွင်းက ဆုတောင်းပြည့်ဘုရား
(၄) လောကနန္ဒာဘုရားဝန်းအတွင်းက ဆုတောင်းပြည့်ဘုရား
(၅) ရွှေဆံတော်ဘုရားဝန်းအရှေ့ဘက်က ဆုတောင်းပြည့်ဘုရား
ဒီ ဘုရား ငါးဆူကို ဖူးမြင်ပြီး အဓိဌာန်ပြုရင် အောင်မြင်တယ်လို့လည်း ယုံကြည်ကြပါတယ်။ နေဝင်နေထွက်ချိန်တွေ ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ အရင်က ပြာဿဒ်ကြီး၊ ရွှေဆံတော် နဲ့ နောက်စေတီတစ်ခုတို့မှာ ဧည့်အလာ များကြတယ်။ ခုတော့ ရွှေဆံတော် ပဲ ကြည့်ဖို့ အဆင်ပြေတော့မယ်ထင်တယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ငလျင်တုန်းက အတော်လေး ထိလိုက်တော့ စေတီတွေပေါ်တက်ခွင့်ကို အတော်များများ ပိတ်ပစ်လိုက်တယ်။ ရွှေဆံတော် ကတော့ တက်ရတာ အတော်လေး မတ်တော့ ပြန်ဆင်းရင် ဖင်ထိုင်ပြီး တစ်ထစ်ချင်း ဆင်းခဲ့ရတာ သတိရမိတယ်။ မိုးတွင်းဆို ခြေချော်နိုင်လို့ ပိုသတိထားရတယ်။
တစ်နေ့တာ ပုဂံခရီးစဉ်အတွက် ဘုရားတွေမှာ သိပ်အချိန်မယူဘူးဆိုရင် အတော်အတန် စုံအောင် ဖူးနိုင်ပါတယ်။ တန့်ကြည့်တောင် ကူးရင်တော့ နည်းနည်း အချိန်ယူတဲ့အတွက် အရမ်းစုံဖို့ မလွယ်ကူလှဘူးရယ်။ ဒီနေရာလေးတွေတော့ အလွယ်တကူ ကူးသွားနိုင်တယ်။
မြစေတီ - ရာဇကုမာရကျောက်စာ
ဂူပြောက်ကြီး (ဝက်ကြီးအင်း) စေတီ
အချိန်နည်းနည်းရဦးမယ်ဆိုရင်တော့ ငှက်ပစ်တောင်၊ သီရိဇေယျဘူမိ ပုဂံနန်းတော် နဲ့ ပုဂံရှေးဟောင်းသုတေသန ပြတိုက် တို့ကို သွားပြီး လေ့လာသင့်ပါတယ်။ ပုဂံ ဘုရားတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကိုတော့ သက်ဆိုင်ရာ ပုံအောက်မှာပဲ ရေးပေးလိုက်ပါတယ်။ ခရီးစဉ်ကို အတိုချုံး မှတ်သားဖို့လောက်ပဲ ဒီမှာ ရေးထားလိုက်ပါတယ်။
ပုဂံမှာ သွားရောက်လည်ပတ်သင့်တဲ့နေရာတွေနဲ့ သိမှတ်ဖွယ်ရာများ
ပုဂံက မြို့ကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ နတ်တွေကို တံခါးစောင့်ခိုင်းထားတာ။ အရင်က မြို့အဝင် တံခါး ၁၂ ချပ် ရှိခဲ့တယ်။
(၁) သရဗေတံခါး (တံခါးစောင့်နတ် - ရွှေပသင်နတ်)
(၂) သရပါတံခါး (တံခါးစောင့်နတ် - ပန်းပဲမောင်တင့်တယ်၊ ညီမ မမြတ်လှ)
(၃) သရဝတ်တံခါး (တံခါးစောင့်နတ် - ဖက်မသင်နတ်)
(၄) ကလေးတံခါး (တံခါးစောင့်နတ် - ငါးဆွဲသင်နတ်)
(၅) မတောင့်တတံခါး (တံခါးစောင့်နတ် - ဝိရုပက္ခနတ်)
(၆) ဝင်ရမနားတံခါး [ဝမ်းမနာ] (တံခါးစောင့်နတ် - ငနွယ်သင်နတ်)
(၇) မကြည်သာတံခါး (တံခါးစောင့်နတ် - မြင်းဖြူရှင်နတ်)
(၈) မင်္ဂလာတံဆိပ်တံခါး (တံခါးစောင့်နတ် - ဝိရူဠနတ်)
(၉) သာစည်တံခါး (တံခါးစောင့်နတ် - ဇမ္ဗူတမွတ်နတ်)
(၁၀) ညောင်ဖြူပင်တံခါး (တံခါးစောင့်နတ် - ဇမ္ဗူရုက္ခနတ်)
(၁၁) ငါးပြီးခတ်တံခါး (တံခါးစောင့်နတ် - ကုဝေရနတ်)
(၁၂) သာတန်းတံခါး (တံခါးစောင့်နတ် - ဇမ္ဗူတန်ဆောင်နတ်)
ဒီတံခါးတွေထဲမှာ ကျန်ရစ်ခဲ့တာဆိုလို့ သရပါ တံခါးတစ်ခုပဲ ရှိတော့တယ်။ အရင်ကတော့ ကားတွေ ဖြတ်လို့ရသေးတယ်။ ခုတော့ အဲ့ဒီ တံခါးကနေ ကားဝင်ခွင့်ကို ပိတ်လိုက်ပါပြီ။ နတ်မောင်နှမကို ပူဇော်လိုသူတွေကတော့ ကားအပြင်မှာ ရပ်ပြီး ပူဇော်လို့ရတယ်။ ဆိုင်ကယ်နဲ့ စက်ဘီးတွေတော့ သွားခွင့်ရပါသေးတယ်။
ပုဂံမှာ ဇာတ်လမ်းများစွာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်။ ဇာတ်လမ်းတွေက ပုံပြင်တွေလို နားထောင်ရတာ ဆန်းကြယ်လွန်းတယ်။ ဒီလို ဆန်းကြယ်တဲ့ ပုဂံ ဇာတ်လမ်းတွေထဲမှာ ငှက်ပစ်တောင်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အဖြစ်အပျက်က ကျွန်တော် စိတ်ဝင်အစားဆုံးပဲ။ ပျူစောထီး က ဆိုးသွမ်းနေတဲ့ ငှက်ကြီးကို သိကြားမင်းပေးတဲ့ လေး နဲ့ ပစ်သတ်နိုင်ခဲ့တယ်။ ဒီငှက်ကြီးကို ပြစ်မျိုးမှဲ့မထင်တဲ့ (မှဲ့တောင် မရှိရဘူးတဲ့) အပျိုစင်တွေကို စားဖို့ ဆက်သရတယ် ကြားဖူးပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ဒီ ငှက်ပစ်တောင်စေတီအနီးက သမီးဝှက်ဥမင်ဟာလည်း စိတ်ဝင်စားစရာ ဖြစ်လာတယ်။ ခုထိ သမီးဝှက်ဥမင် က ငှက်ပစ်တောင်စေတီ သွားတဲ့လမ်းမှာ ရှိနေတုန်းပါပဲ။ လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ သမီးတွေကို ဝှက်ထားရတဲ့ ဥမင် လို့လည်း ပြောကြသလို၊ တချို့ကလည်း ဒီဥမင်မှာ အပျိုစင်တွေ လာထားပြီး ငှက်ကြီးက လာစားတယ်ဆိုပါတယ်။ ပြစ်မျိုးမှဲ့မထင်တဲ့ အပျိုစင် ဟုတ် မဟုတ်ကို ငှက်ကြီး ဘယ်လို ခွဲခြားသလဲ အတော်စိတ်ဝင်စားမိပါတယ်လေ။ ပျူစောထီး က ဒီ ငှက်ဆိုးကြီးကို ရှင်းလင်းသုတ်သင်နိုင်လို့ ငှက်အမွှေးတစ်တောင်ကို ဘုရင့်သမီးတော် ၇ ပါးက ပြန်သယ်လာတဲ့အခါ မသယ်နိုင်တော့လို့ ပစ်ချခဲ့တဲ့နေရာကို ငှက်တောင်ပစ် လို့ ခေါ်ကြရင်း နောက်တော့ ငှက်ပစ်တောင် ဖြစ်လာတယ်လို့ တချို့လည်း ဆိုကြပါတယ်။ တချို့ကလည်း ဒီနေရာကနေ ငှက်တောင် ကို ခုန်ပစ်တာဖြစ်လို့ ငှက်တောင်ပစ် ကနေ ငှက်ပစ်တောင် ဖြစ်လာတယ်လည်း ပြောကြပါတယ်။ ဒီငှက်ပစ်တောင်စေတီနဲ့ တစ်ဆက်တည်း ရှိတဲ့ ရှင်အရဟံအုတ်ကျောင်းကလည်း နာမည်ကျော်ပါတယ်။ အရည်းကြီးတွေ ခေတ်ကောင်းတုန်းမှာ ရဟန်းတော် ၅၀၀ ပုန်းအောင်း တရားကျင့်ရတဲ့ ဥမင်တွေလည်း ဒီမှာ တွေ့နိုင်ပါတယ်။
အရည်းကြီးတွေ ခေတ်ကောင်းတုန်းမှာ ရဟန်းတော် ၅၀၀ ပုန်းအောင်း တရားကျင့်ရတဲ့ ဥမင်တွေ
စွယ်တော်စေတီတွေထဲကတစ်ဆူဖြစ်တဲ့ တုရင်တောင်စေတီ က ပုဂံမြို့သစ်ကနေဆို ပိုနီးပါတယ်။ အဲ့ဒီကနေ ဇီးအိုသစ်လှရွာ ဘက်ကို Trekking သွားလို့ရသေးတယ်။ အဲ့ဒီအကြောင်းတော့ နောက်မှ ရေးပါမယ်။ (၁၁) ရာစု က တည်ထားတဲ့ စေတီ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ (သီဟိုဠ် ပေါ့နော် အဲ့ဒီတုန်းကတော့) က စွယ်တော်ပွား တစ်ဆူ ကို ဆင်ဖြူတော်ပေါ်တင်ပြီး အဓိဌာန်နဲ့ လွှတ်တဲ့အခါ ဒီနေရာမှာ ဝပ်သွားလို့ ဘုရားတည်ခဲ့တယ်လို့ မှတ်သားရပါတယ်။ တောင်ပေါ်က စေတီဖြစ်လို့ လေတဖြူးဖြူးနဲ့ နေလို့အရမ်းကောင်းတယ်။ ပုဂံဘုရားတွေကို မြင်ရတဲ့ ရှုခင်းကောင်းကောင်းတော့ မရှိပါဘူး။ စေတီနားမှာ ကျောက်စာရုံ ရှိလို့ အဲ့ဒီက ကျောက်စာတွေ လေ့လာချင်ရင် လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
ပုဂံမှာ အစည်ကားဆုံး စေတီကြီး လို့ ကျွန်တော်တော့ ယူဆမိတယ်။ စောင်းတန်းရှည်ရှည်ရှိပြီး ဈေးရောင်းဈေးဝယ်တွေရော၊ ဘုရားဖူးတွေရော ရှုပ်ထွေးနေတဲ့နေရာလို့ သတ်မှတ်မိတယ်။ လက်ဆောင်ပေးစရာ အမြန်လိုရင် ကျွန်တော် ဒီမှာပဲ ဝယ်လေ့ရှိတယ်။
ဒီမှာ စိတ်ဝင်တစားလေ့လာသင့်တာတွေက -
ပစ္စယံ ၃ ထပ်မှာရှိတဲ့ ဇာတ်တော်တွေကို ထုတ်နုတ်ဖန်တီးထားတဲ့ စဉ့်ကွင်းလက်ရာတွေရှိတယ်။
စေတီ အရှေ့တောင်ထောင့်မှာ (၃၇) မင်း နတ်နန်း ရှိတယ်။ အဲ့ဒီမှာ ပုဂံခေတ်ဦးကာလ သစ်သားပန်းပုလက်ရာ အမြင့် (၇) ပေ ရှိတဲ့ သိကြားမင်းရုပ်တုကြီးရယ်၊ ပုဂံခေတ်လက်ရာ နတ်ရုပ်တုတွေ စုံစုံလင်လင် တွေ့ရမယ်။
ရင်ပြင်ပေါ်က တန်ဆောင်းတစ်ခုမှာ မြင်တွေ့ရမဲ့ သူအို၊ သူနာ၊ သူသေ၊ ရဟန်း စတဲ့ ရုပ်တုတွေကို လေ့လာနိုင်တယ်။
ကျန်စစ်မင်း ရဲ့ ကုသိုလ်တော်အဖြစ်ရှိတဲ့ ကျောက်ခြေတော်ရာ တစ်စုံ ကို မြင်တွေ့ရမယ်။ အလျား ၃ ပေ၊ အနံ ၁ ပေ ရှိပြီးတော့ အမှတ်လက္ခဏာစုံကို ထွင်းထုထားတယ်။ ဒီခြေတော်ရာနဲ့ တစ်ပုံစံတည်း တစ်ရွယ်တည်းကို အာနန္ဒာဘုရားမှာလည်း တွေ့ရတယ်။
ခရစ်နှစ် ၁၀၉၀ ခုနှစ်က တည်ခဲ့တဲ့ အာနန္ဒာဘုရားက ကျန်စစ်မင်းရဲ့ စေတီအဖြစ် လူသိများပါတယ်။ အထဲမှာ မတ်ရပ်တော် ဆင်းတုကြီး ၄ ဆူ ရှိတဲ့အနက် တောင်ဘက်နဲ့ မြောက်ဘက်စောင်းတန်းက ဆင်းတုတော်တွေက မူလ လက်ရာလို့ ပြောကြပါတယ်။ ပွင့်ပြီးတဲ့ ဘုရားလေးဆူကို ကိုယ်စားပြုတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ပုဂံခေတ်လက်ရာ ဆင်းတုတော်တွေရဲ့ ထူးခြားချက်ကတော့ အဝေးက ကြည့်ရင် ပြုံးနေတဲ့အသွင် တွေ့ရပြီး၊ တဖြည်းဖြည်း နီးလာရင် တည်ကြည်သွားတဲ့ ပုံစံ မြင်တွေ့ရပါတယ်။ အရင်ခေတ်က ပြည်သူတွေက အပြင်ဘက်ဆုံး စည်းကနေပဲ ဖူးမြော်ခွင့်ရပြီး ရာထူးအဆင့်အလိုက် အတွင်းစည်းတွေမှာ ဘုရင် နဲ့ မူးမတ်တွေက ဖူးခွင့်ရတယ်ဆိုပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် ပြည်သူများမြင်တွေ့ရတဲ့နေရာက ဖူးကြည့်ရင် ဘုရားဆင်းတုတော်တွေက ပြုံးနေတဲ့အသွင်ကို စီမံထားတယ်လို့ မှတ်သားဖူးခဲ့ပါတယ်။ အာနန္ဒာဘုရားရဲ့ မြောက်ဘက်စောင်းတန်းအနီးက ထူးခြားတဲ့ နံရံဆေးရေးပန်းချီတွေကို မြင်တွေ့နိုင်ပါသေးတယ်။
ရာဇကုမာရ်ရဲ့ ကောင်းမှုစေတီတစ်ဆူဖြစ်တဲ့ မြင်းကပါရပ်က ဂူပြောက်ကြီးစေတီဟာ ဖခင်ကျန်စစ်မင်းကို ကျေးဇူးပြုတဲ့ စေတီအဖြစ် လူသိများသလို၊ စေတီအတွင်းနံရံတွေက ရှားပါးတန်ဖိုးရှိလွန်းလှတဲ့ နံရံဆေးရေးပန်းချီတွေကြောင့် ကမ္ဘာကျော်နေတဲ့ စေတီဖြစ်ပါတယ်။ အပြင်ဘက်မှာလည်း ဘီလူးပန်းဆွဲ၊ ထောင့်ပန်း စတဲ့ အင်္ဂတေလက်ရာတွေကို တွေ့မြင်နိုင်သလို အတွင်းဘက်မှာလည်း ၅၅၀ ဇာတ်နိပါတ်တော်တွေ၊ ကောသလအိပ်မက် ၁၆ ချက် စတဲ့ ရှေးအနုပညာလက်ရာတွေကို ရင်သပ်ရှုမော တွေ့မြင်ကြရပါတယ်။ မူလ အရောင်တွေအတိုင်း ရှိနေသေးတဲ့ နံရံဆေးရေးပန်းချီတွေကို တွေ့မြင်ကြရမှာမို့ ထိန်းသိမ်းမှုကိုလည်း တင်းတင်းကြပ်ကြပ်လုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ အတွင်းမှာ ဓါတ်ပုံ ဗီဒီယို ရိုက်ခွင့်မရှိသလို၊ လိုက်လံရှင်းပြပေးသူက သတ်မှတ်ထားတဲ့ မီးအလင်းကိုပဲ သုံးစွဲလို့ လိုက်လံပြသပေးတတ်ပါတယ်။ ဘုရားအပြင်ဘက်မှာ ယာယီရေဆေးတက်တူး ထိုးချင်သူများအတွက် ပန်းချီဆရာများက ရေးဆွဲပေးနေပါတယ်။ ဆေးအမဲ တစ်ရောင်တည်းဆိုရင် ၁၅၀၀ ကျပ် ဖြစ်ပြီး ဆေးနှစ်ရောင် သုံးရင် ၂၀၀၀ ကျပ် ကျသင့်ပါတယ်။ အတွင်းဘက်မှာလည်း သဲပန်းချီရောင်းတဲ့ ဆိုင်လေးတွေ ရှိပါတယ်။
ရာဇာကုမာရ်ကျောက်စာ ဒါမှမဟုတ် မြစေတီကျောက်စာ ထိန်းသိမ်းပြသထားတဲ့အတွက် ထင်ရှားတဲ့ မြစေတီ ကို မြင်းကပါ ဂူပြောက်ကြီးစေတီနားမှာပဲ တစ်ဆက်တည်း ဖူးမြင်နိုင်ပါတယ်။ မွန်၊ မြန်မာ၊ ပျူ၊ ပါဠိ လေးဘာသာနဲ့ ရေးထိုးထားတဲ့ ကျောက်စာတိုင် ကို ၁၈၈၆ ခုနှစ်မှာ ဒေါက်တာ ဖိုရှမ်းမားက စတင်တွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒီမြစေတီရဲ့ အထက်ပိုင်းက ၁၉၇၅ ခုနှစ်မှာ ငလျင်ဒဏ်ခံရပြီး ပျက်စီးသွားခဲ့လို့ အသစ်ထပ်မံ ပြင်ဆင်တည်ဆောက်ခဲ့တာ ဖြစ်တဲ့အတွက် မူလလက်ရာအစစ်မဟုတ်တော့ဘူးလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
ခုတော့ ဗူးဘုရားက အရင်လက်ရာ တစ်ခုမှ မရှိတော့ပါဘူး။ အရင် ပုဂံ ဗူးဘုရားကတော့ ၁၉၇၅ ခုနှစ်မှာ ဧရာဝတီမြစ်ရေတိုက်စားလို့ မြစ်ထဲ ပြိုကျခဲ့ပါပြီ။ အရင်ကတော့ ထုံးသင်္ကန်းနဲ့ စေတီပါ။ ခုတော့ ရွှေသင်္ကန်းနဲ့ ဖြစ်သွားပါတယ်။ ပျူစောထီး တည်ခဲ့တဲ့ ဘုရားတစ်ဆူပါပဲ။ ဗူးရိုင်းပင်တွေ နှိမ်နင်းအောင်မြင်လို့ တည်ခဲ့တာလို့ မှတ်သားဖူးပါတယ်။ အောက်မှာ လှေဆိပ်ရှိလို့ တန့်ကြည်တောင်စေတီကို ဒီနေရာကနေ လှေစီးပြီး သွားနိုင်ပါတယ်။
ခရစ်နှစ် ၁၂၁၈ ခုနှစ်မှာ တည်ခဲ့တဲ့ စေတီကြီးပါ။ လိုဏ်ဂူဘုရားကြီးအဖြစ် တည်ဆောက်ထားတော့ အလယ်လိုဏ်ဂူမှာ လျှို့ဝှက်ပတ်လမ်း တစ်ခု ထည့်ပြီး တည်ဆောက်ထားတယ် ဆိုကြပါတယ်။ ကြောင်လိမ်လှေခါးထိပ်မှာ ရှိတဲ့ လျှို့ဝှက်ပေါက်ကနေ သွားရတယ်တဲ့။ အရင်က အရပ်စကား ကြားဖူးတာက ဒီစေတီက ထီးရှိရင် မင်း မရှိ၊ မင်း ရှိရင် ထီး မရှိ လို့ ကြားဖူးခဲ့ပေမဲ့ တကယ်ကတော့ နရပတိစည်သူမင်းကြီး နတ်ရွာစံခါနီးမှာ သူ့ရဲ့ သားတော် ငါးပါးထဲက မင်းဖြစ်ထိုက်သူကို အများရှေ့မှာ ထီးဖြူကို စိုက်ပြီး ထီးညွှတ်သူကို မင်းအဖြစ် တင်မြှောက်ဖို့ အဓိဌာန်နဲ့ ရွေးချယ်တယ်ဆိုပါတယ်။ သူကိုယ်တိုင်ကလည်း သားတော် ဇေယျသိင်္ခမင်းသား ကို သဘောကျသလို၊ ထီးဖြူ ကလည်း သူ သဘောကျတဲ့ သားတော်ရှေ့ကို ညွှတ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါနဲ့ ဇေယျသိင်္ခမင်းသားက နားတောင်းများမင်း ဖြစ်လာခဲ့ရတယ်ပေါ့။ ဒီတော့ ထီး ကလည်း အလိုရှိ၊ မင်း ကလည်း အလိုရှိသူ က မင်းအဖြစ်တင်မြှောက်ခံခဲ့ရတာမို့ ထီးလိုမင်းလို ဆိုပြီး ဖြစ်လာခဲ့တာပါတဲ့။ ကျွန်တော်ကတော့ ရယ်စရာတွေးမိတယ်၊ မဟုတ်မှလွဲရော မင်းကြီးက သူပေးချင်တဲ့ သားတော်ကို ပေးနိုင်ဖို့ တမင်များ စီစဉ်ခဲ့သလား မသိဘူးလို့။ ဒီဘုရားကို ဝင်တဲ့ လမ်းကလေးက သာယာတော့ ဓါတ်ပုံရိုက်လို့ လှတယ်။ လမ်းကလေးအဆုံးမှာ ဘုရားကြီးကို မြင်သာနေတာမို့ လမ်းပေါ်ဆင်းရိုက်ရတာလည်း ကြည်နူးစရာကောင်းတယ်။ ဒီဘုရားမှာရှိတဲ့ ရှေးမူလလက်ရာ နံရံဆေးရေးပန်းချီတွေ၊ ဇာတာခွင်နဲ့ မင်စာ တွေကို လေ့လာလို့ရပါတယ်။
စွယ်တော်လေးဆူစေတီထဲက တစ်ဆူဖြစ်တဲ့ လောကနန္ဒာစေတီ က ဧရာဝတီမြစ်ကမ်းအလှကို မြင်တွေ့ရမဲ့ နေရာပါ။ ဆုတောင်းပြည့်ဘုရားလည်း ရှိပါတယ်။ စေတီပေါ်မတက်ခင် ခြေရင်းက ကန်တော်ထဲမှာ ငါးစာကျွေးရတာလည်း ကြည်နူးစရာ ကောင်းပါတယ်။ ပေါင်မုန့်တစ်ထုတ်ကို ၂၀၀၀ ကျပ် ပေးရပါတယ်။ ဧရာဝတီမြစ်အလှနဲ့ ဓါတ်ပုံရိုက်လို့ကောင်းတဲ့နေရာလည်း ဖြစ်လို့ လူငယ်တော်တော်များများ ဘုရားအုတ်စည်းရိုးပေါ်မှာ တွေ့ကြရမဲ့ စေတီဖြစ်ပါတယ်။
နေဝင် နေထွက် ကြည့်လို့ အကောင်းဆုံး စေတီတစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ကြတယ်။ တက်ရတာ အရမ်းမက်လို့ ကျွန်တော် အရမ်းကြောက်တယ်။ တက်တုန်းက အကောင်း၊ ဆင်းတော့ ဖင်ထိုင်လျက် ပြန်ဆင်းရတယ်။ တချို့က ပြုံးစိစိနဲ့မို့ ရှက်လိုက်တာ မပြောပါနဲ့။ ကျွန်တော်က အမြင့်ကြောက်သူဆိုတော့ ပိုဆိုးရော၊ ခေါင်းတွေတောင် ချာချာလည်မူးလာလို့ လက်တန်းကို မနည်းကိုင်ဆင်းခဲ့ရတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရှုခင်းရော၊ နေဝင်နေထွက်ရော ဒီမှာ လာကြည့်ဖို့ အရမ်းကောင်းတယ်။ မိုးတွင်းဆိုပေမဲ့လည်း အမြဲ မိုးရွာနေတာ မဟုတ်လို့ လူသူ ရှင်းရှင်း ကြည့်နိုင်တယ်၊ ခံစားနိုင်တဲ့နေရာပေါ့။ စေတီရဲ့ ပစ္စယံအဆင့်ဆင့်မှာ ၅၅ ဇာတ်နိပါတ်တော်တွေကို ပုံဖော်ထားတဲ့ စဉ့်ချပ်တွေ ရှိနေတယ်။ လေ့လာနိုင်တယ်။
ဒီစေတီကို လာရင် သဘောကျတာက စေတီရဲ့ ပစ္စယံတွေပေါ် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးမရွေး တက်လို့ရတဲ့နေရာ ရှိနေတယ်။ ပြီးတော့ ပုဂံရဲ့ ရှုခင်းလှလှကို မြင်ရပြီး ဓါတ်ပုံရိုက်လို့ အရမ်းကောင်းတယ်လေ။ တော်တော်များများ ဒီကို ရောက်လာကြတာ သတိထားမိတယ်။ ဘုရားသမိုင်းကတော့ သိပ်မကောင်းလှဘူး။ အဖေ ဖြစ်တဲ့ အလောင်းစည်သူမင်းကို သားဖြစ်တဲ့ နရသူက ဘုရားအတွင်းမှာ အဝတ်ပုဆိုးနဲ့ ဖိပြီး သတ်ခဲ့တာ။ ဒီဘုရားက အလောင်းစည်သူမင်းရဲ့ နန်းဦးစေတီလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ပုဂံ နန်းမြင့်မျှော်စင် ပေါ်ကနေ ပုဂံကို ခြုံကြည့်လို့ရသလို၊ အပေါ်ဆုံးထပ်မှာ ပုဂံအလှကို ကြည့်ရင်း အစားအသောက် ကောင်းကောင်း စားလို့ရတယ်။ ပုဂံဝတ်စုံဝတ်ပြီး ဓါတ်ပုံရိုက်ချင်လည်း ဒီမှာ ရိုက်လို့ရတယ်။
အနော်ရထာမင်းကြီးရဲ့ နန်းတော် ပုံစံတူ နန်းတော်ကို သရပါတံခါးအနီးမှာ ပြခန်းအသွင် တွေ့မြင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဖက်မှာတော့ ကျန်စစ်မင်း ရဲ့ နန်းတော် တူးဖော်လက်စ ကို တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ မန္တလေးနန်းတော်လောက် သွားစရာ မကျယ်ပေမဲ့ သူ့နေရာနဲ့သူ စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းနေပါတယ်။ ပုဂံရွှေနန်းတော်ကြီးထဲမှာ အဆောင်အဦး ၁၂ ခု ကို လေ့လာနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သွားသင့်တဲ့နေရာလို့တော့ မှတ်ချက်ပေးချင်ပါတယ်။ တကယ်ထိန်းသိမ်းအပ်တဲ့ ရှေးမူလ လက်ရာတွေ တစ်စုတဝေးတည်း ရှိနေတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ ကျောက်စာတွေ၊ နံရံဆေးရေးပန်းချီတွေ၊ သမိုင်းကြောင်းတွေ၊ ရှေးခေတ်ဝတ်စားဆင်ယင်ပုံတွေ၊ ဆံပင်ထုံးဖွဲ့ပုံတွေ၊ ရှားပါးရှေးဟောင်းဆင်းတုတော်တွေ နဲ့ တခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်အချက်တွေ စုဆောင်းသိမ်းဆည်းပြသထားတဲ့နေရာဖြစ်လို့ပါပဲ။ ဝင်ကြေးလည်း မများလှပါဘူး။ အာနန္ဒာဘုရား မြောက်ဘက်မုခ် နားမှာ ရှိပါတယ်။
ပုဂံကို မိုးတွင်းသွားတာ တကယ် သင့်လျော်ရဲ့လား?
အကောင်းအဆိုး ဒွန်တွဲနေပေမဲ့ ခုလို မေးလာရင်တော့ ဟုတ်ကဲ့ အထူးသင့်လျော်ပါတယ်လို့ ကျွန်တော်က ထောက်ခံမိမယ်။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ နေဖို့ နဲ့ စားဖို့ သက်သာသလို၊ ဧည့်ပါးချိန်မှာ ကား၊ ဆိုင်ကယ်၊ စက်ဘီး နဲ့ မြင်းလှည်းခတွေလည်း သက်သာတယ်။ ငှားမရမှာ မပူရဘူး။ နောက်ပြီး ရာသီဥတုက အေးမြပြီး ပုဂံဝန်းကျင်က အညာနဲ့မတူဘဲ စိမ်းစိုလှပနေတဲ့ တမူထူးတဲ့အလှကို မြင်ရပါတယ်။ အဆင်မပြေနိုင်တာက မိုးသည်းသည်း ရွာတတ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ရွာချိန်မကြာဘူး။ ပျော်တတ်ရင် မိုးကာလေး ဝယ်ပြီး လည်လို့ရတယ်။ ဆိုင်တော်တော်များများ မိုးကာလှလှလေးတွေ တင်ရောင်းတတ်ကြပါတယ်။ မိုးတွင်းမို့ ဘုရားတွေပေါ် တက်ရင် ခြေချော်နိုင်တာကို သတိထားရပါမယ်။ မကြာသေးခင်ကမှ သဘာဝဘေးဒါဏ်ခံစားထားရတာမို့ ဘယ်နေရာမှာ ဘယ်လိုအနေအထားမျိုး ဖြစ်နေမယ် မသိနိုင်တဲ့အတွက် သွားလာတာ မိုးတွင်းမှာ ပိုသတိရှိရပါမယ်။ တွင်းအောင်းသတ္တဝါတွေလည်း သတိပြုဖို့လိုတယ်။ အဆင်မပြေနိုင်ဆုံးအချက်တစ်ခုက မိုးတွင်းကာလမှာ နာမည်ကြီး စေတီကြီးတွေကို ဖျာတွေနဲ့ ပတ်ပြီး ရာသီဥတုဒါဏ်မခံရအောင် ထိန်းသိမ်းထားလိုက်တာဖြစ်လို့ စေတီကြီးကို မျက်မြင်ဖူးတွေ့ချင်သူတွေအတွက် ကသိကအောင့်ဖြစ်စေပါတယ်။ အတွင်းက ဆင်းတုတော်တွေကိုပဲ ဖူးမြင်ရဖို့ ရှိပါမယ်။ ရေကျော်တဲ့ နေရာတွေကို သတိထားသွားရသလို၊ သဲချောင်းတွေမှာ ကားမောင်းဖြတ်ကူးရင်လည်း သတိပြုရပါမယ်။ မိုးဦးမှာ ရှိတတ်တဲ့ ယင်ကောင်ကိစ္စကလည်း ပုဂံ စားသောက်ဆိုင်တချို့မှာ ကြုံတွေ့ရပါဦးမယ်။
သတင်းကြားမိတာက ပုဂံနဲ့ပတ်သက်လို့ အညွှန်း Application တစ်ခု လုပ်ဆောင်နေပြီလို့ သိရပါတယ်။ ပြီးရင်တော့ ခရီးသွားအားလုံးအတွက် အတော်အကျိုးရှိမှာမို့ ကြိုဆိုပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ ဘယ်လိုပဲ အဆင်မချောတဲ့ကိစ္စတွေရှိရှိ၊ အရာအားလုံးမှာ ဒီလိုပဲ ကောင်းတာ မကောင်းတာ ရှိမြဲမို့လို့ ကျွန်တော်ကတော့ ကောင်းတဲ့ဘက် ပိုများတဲ့ ပုဂံဒေသကို မိုးတွင်းခရီးသွားခြင်းကို နောက်နှစ်တွေမှာလည်း ဆက်ပြီး လုပ်ဆောင်ဖြစ်ဦးမှာပါ။ ဒီတစ်ခေါက်နဲ့ဆို မိုးတွင်း ပုဂံရောက်တာ ၃ ခါ ရှိသွားပြီလေဗျာ။ တစ်ခေါက် နှစ်ခေါက် နဲ့ လေ့လာစရာ မကုန်တဲ့ ပုဂံပြည်ကြီးက နောက်အခေါက်ပေါင်းများစွာမှာလည်း အခုအတိုင်း ကျွန်တော့်ကို အံ့အားသင့်စရာ မှတ်သားစရာတွေ ပေးဦးမဲ့ ခရီးသွားတွေရဲ့ ရတနာသိုက်ကြီးတစ်ခုလို့ တင်စားချင်ပါတော့တယ်။